मार्मिक कथा – उ मेरी बुहारी मात्र होइन, मेरी छोरी पनि हो ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आइतबार, असोज ४ २०७७
“बुहारी, ओ बुहारी ! कता मरिस् ?” भित्र बाट आवाज आयो, “आएँ सासू आमा ! बाँचेकी नै छु” । “खै त मेरो चिया ? कति बेला देखि पूजा सिद्ध्याएर बसेकी छु !” “ल्याई हालेँ आमा !” बुहारीले साथमा पकोरा पनि ल्याएर आई ।
सासूले भनिन्, “तेलका पकोरा खुवाएर मार्ने भइस् मलाई, हैन ?” बुहारीले भनिन्, “ठिक छ आमा, त्यसो भए म तपाईँलाई अर्को ल्याएर आउँछु ।” सासूले भनिन्, “भयो, रहन दे । अब बनाई सकिस्, यही नै खान्छु। ”
सासूले पकोरा हातमा उठाउँदै भनिन्, “धेरै नराम्रा पकोरा बनाइस् तैँले।” बुहारी भन्छिन् “आमा, मैले लुगा धुनु छ, म जान्छु।” बुहारी ढोकाको छेउमा लुकेर हेर्छिन् । सासूले छिटो छिटो पकोरा खान सुरु गरिन् र पूरा सिद्ध्याइन् । बुहारी मुस्कुराउँदै त्यहाँ बाट गएर काम गर्न थालिन् ।
अब खाजाको समय थियो । सासू फेरी चिच्याइन्, “केही छ खान लाई ?” बुहारीले केही जवाफ दिइनन्, सासूले फेरि चिच्याइन्, “आज भोकै मार्छस् कि क्या हो मलाई ?”
बुहारीले आएर खिचडी अगाडि राखिन् । सासूले रिसाउँदै भनिन्, “यो के हो ? म खान्न यो, उता लैजा ।” बुहारीले भनिन्, “तपाईँलाई डाक्टरले दिनको समयमा खिचडी खान भनेको छ, यो त खानै पर्छ ।” “अं, अब तँ मेरी आमा हुने भइस्,” सासूले भनिन् ।
बुहारी हाँस्दै त्यहाँबाट गइन् ।
आज उनको घरमा पूजा थियो । बुहारी बिहान चार बजे उठिन्, पहिले नुहाउँछिन्, त्यसपछि फूलहरू ल्याएर माला बनाउँछिन्, भान्छा सफा गर्छिन्, र खाना बनाउँछिन् । बिहानको दस बज्यो । अब सासू पनि उठिसकेकी छिन् । बुहारीले पण्डितजीसँगै भगवानको लुगा बनाइरहेकी थिइन् । आज उनका श्रीमानले पनि कार्यालयबाट छुट्टी लिएर घरमै थिए । उपासना सुरु भयो । सासूले बुहारीलाई चिच्याउँछिन्, यता यो छैन, उता त्यो भेटिएन । बुहारी दौडेर आउँछिन्, सबै काम गर्छिन् ।
अब दिउँसोको तीन बजी सकेको थियो । आरतीको लागि तयारी भइरहेको थियो । पण्डितजीले सबैलाई आरतीका लागि बोलाए र सबैको हातमा आरतीको थाल दिए । बुहारीले थाल समात्ने बित्तिकै थाल उनको हातबाट खस्यो । सायद खाना बनाउने क्रममा बुहारीको हातमा तेल रह्यो होला, जसलाई उनले सफा गर्न बिर्सिछिन् ।
सबै मानिसहरूले विभिन्न तरिकाले कुरा गर्न थाले, कस्ती बुहारी रै छे ! केही पनि थाहा छैन । एक चीज राम्ररी गर्न पनि सक्दैन । कस्ती बुहारी उठाएर ल्याई दिएछन्, आरतीको थाल सम्म राम्रोसँग समात्न नसक्ने । उनका पति पनि रिसाए । तर सासू भने चुप थिइन् । केही भनिनन् । यति मात्र भनिन् “सिक्दै छे, बिस्तारै सिक्नेछ ।”
अब सबैलाई खाना पस्किन थालियो । बुहारी दौडी रहेकी छिन् । कहिले यता त कहिले उता । खाना पस्किन्छिन्, पानी ल्याउँछिन् । ७० देखि ८० जना सम्म भई सकेका थिए । दुइटा नोकर र बुहारी मात्र छन् काम गर्ने । यद्यपि सबै कामहरू त्यहाँ एकदम राम्रो तरिकाले भइरहेको थियो । अब उसकी सासू र छेउछाउका केही मानिसहरू खान बसे । बुहारीले खाना पस्किन सुरु गरिन् । रोटीको पहिलो गाँस खाँदै सासूले भनिन्, “तैँले खानामा नुन राम्रो सँग थपिनस् । किन एक काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्दिन होली ? मेरो पछाड़ी यसले घर कसरी चलाउली ? ”
वरपरका छिमेकीहरूलाई त चिन्नु नै हुन्छ तपाईँहरूले । केही न केही कमी निकाल्नका लागि बहाना खोजिरहेका हुन्छन् । सुरु भए सबै । त्यस्तै खाना छ, त्यस्तै बुहारी, यो, त्यो आदि आदि ।
दिउसोको खाना सकियो । बुहारी लागिन् नोकरहरूसँगै भाँडा माझ्न तिर ।
रातमा जगराताको कार्यक्रम राखिएको थियो । बुहारीले पनि एक दुई वटा गीत गाउन भनेर स्टेजमा गइन् । सासूले तल बाट चिच्याइन्, “मेरो नाक नकटाएस् ! गाउन आउँदैन भने न गा, भयो आइजा फर्केर ।”
बुहारी मुस्कुराइन् र गाउन थालिन् । सबैले उनको गीतको प्रशंसा गरे तर सासूले भनिन्, “युवावस्थामा यो भन्दा राम्रो गीत मैले गाउँथेँ । तँलाई केही थाहा छैन ।” बुहारी मुस्कुराउँदै त्यहाँ बाट गइन् ।
अब बेलुकाको खाना खुवाउने क्रम जारी थियो । उनको श्रीमानको अफिसका साथीहरूले अलि साइडमा ड्रिङ्क गर्न बसे । उनका पतिले ठुलो स्वरमा भने, “आइस् (ice) ल्याएर आऊ छिटो ।” सासू चिच्याइन, “यहाँ दाल छैन ।” अर्कोतर्फ, पति चिच्याए, “यता कोल्ड ड्रिङ्क छैन, पापड ल्याएर आऊ ।” छिटो छिटो यता र उता गर्दा मेज हल्लियो र उनको श्रीमानको रक्सीको बोतल भुईँमा खसेर भाँचियो ।
रिसाउँदै श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई दुई थप्पड लगाए, “मूर्ख आइमाई, राम्ररी देखेर गर्न सक्दिनस् । तँलाई यति पनि काम गर्न आउँदैन ?” सबै जनाले हेर्न थाले, उनकी श्रीमती रुँदै कोठातिर दगुरिन् ।
तब उनका साथीहरूले भने, “यार ! पुरै मुड खराब भयो । यहाँ नबोलाएको भए हुन्थ्यो, हामी कहीँ अर्को ठाउँमा पार्टी गर्ने थियौँ । कस्ती अशिक्षित र मूर्ख पत्नी ल्याएछौ तिमीले ? उसलाई पाहुनाहरूको सम्मान गर्न र आफ्नो काम गर्न पनि आउँदैन । तिमीले हाम्रो अपमान गर्‍यौ यार ।”
अब छिमेककी महिलाहरूले त बहाना पाई सकेकी थिइन् । भन्न थालिन्, “हेर त, तिम्रो बुहारीले के गरिदियो ? कुनै कामकी छैन म भन्छु, तिम्रो छोराको अर्को विवाह गर । यस जङ्गलीलाई हटाऊ ।”
सासू उठिन् र आफ्नो छोराको नजिक गई र उसको गालामा थप्पड लगाउँदै भनिन्, “अरे नालायक, तैँले मेरी बुहारीलाई कुटिस्, कसरी हिम्मत भयो तेरो ? तेरा खुट्टा भाँचिदिनेछु म अहिले को अहिले ।”
उनका छोराका साथीहरूले केही कुरा गर्न खोज्दा ठुला ठुला आँखा पार्दै भनिन्, “चुप लाग, एकदम चुप ! तिमीहरू यहाँ रक्सी पिउन आएका हौ ? जबकि थाहा छ, यहाँ आज पूजा र जगराता छ, तिमिहरूलाई पार्टी गर्नु छ ! यही संस्कार दिएका छन् तिमिहरूका आमाबुवाहरूले ? अनि मेरो बुहारीलाई कसले मूर्ख भन्यो ? सामने आऊ त ! चप्पलले हिर्काउनेछु यदि कसैले मेरी बुहारीलाई एउटा पनि अपशब्द भन्यो भने !” फेरी छोरा तिर उन्मुख हुँदै भनिन् “पापी, तैँले त्यो केटीलाई हिर्काइस् किनकि तेरो रक्सीको बोतल उसबाट खस्यो । अरे पापी, त्यो बच्ची बिहान चार बजेदेखि नै सबै घरका कामहरू गर्दै छे । न त बिहानदेखि खाजा खाएकी छ, न दिउसो खाना खाई । फेरी पनि हाँस्दै, सबैको कुरा सुन्दै, घरका सबै कामहरू गर्न जारी राखेकी छे । तेरो साथीहरूलाई मन परिन अरे ! जुत्तै जुत्ताले हिर्काऊँनेछु तेरा साथीहरूलाई पनि, यदि उनीहरूले फेरी यस्तो दोहोर्‍याए भने ।” उसका साथीहरू एक एक गरेर चुपचाप त्यहाँ बाट भागे ।
सासू बुहारीको कोठामा गइन् र बुहारीलाई हात समातेर बाहिर ल्याइन् । उनले सबै जनाको अगाडि भनिन्, “कसले भन्यो कि तिम्री बुहारीलाई घरबाट निकालेर अर्को बुहारी ल्याऊ ? सामने आउँ त खै, को हो भन्ने !” कोही अघि आएनन् ।
फेरी सासूले भनिन्, “तिमिहरूलाई थाहा नै के छ र मेरी बुहारीको बारेमा ? यो मेरी ‘आमा’ पनि हो र ‘छोरी’ पनि । ‘आमा’ यस कारण कि यसले मलाई गलत कुरा या गलत काम गर्दा हप्काउँछ र ‘छोरी’ यस कारण कि यसले मेरो हृदयको भावनाहरू सधैँ बुझ्दछ । यसले दिन र रात मेरो सेवा गर्दछ । मैले हजार चोटि यसलाई गाली गर्दा पनि यसले जवाफमा एउटा शब्द पनि बोल्दिन । न सामने, न पछाडि । र तिमीहरू भन्छौ अर्को बुहारी ल्याऊ ?”
“सम्झना त होला नि तिमीलाई चुट्की की हजुरआमा तिम्री बुहारीको करतूत ?” सासूले रिसाएर छिमेकी महिलालाई सोधिन् । “गएकै हप्ता तिम्रा दुवै बच्चाहरूले तिमी बूढाबूढीहरूलाई भोकै घरमा राखेर आफू घुम्न गएका होइनन् र ? मेरी यसै बुहारीले सात दिनसम्म तिमीहरूको घरमा खाना बनाएर तिमिहरूलाई खुवाएको यति छिटो बिर्सी छौ ! तिम्रो खुट्टा सम्म दबाई दिने गरेकी होइन र ? अनि तिमी मेरी बुहारीलाई मूर्ख भन्छौ ? अरे, मूर्ख त तिमीहरू हौ, जसले कोइला र हीरा बिचको भिन्नता जान्दैनन् । यदि फेरी कसैले मेरो बुहारीको बारेमा कुनै कुरा गर्योम भने मैले जानेकी छु के गर्नु छ । उ मेरी बुहारी मात्र होइन, मेरी छोरी पनि हो ।” बुहारीले रसाएका आँखा लिएर कोठामा गइन् ।
सासूले प्लेट उठाइन त्यसमा खाना पस्केर आफ्नी बुहारीलाई आफैँ लगिन । सासूले खाना ल्याएको देख्दा बुहारीले भनिन्, “यो के गर्नु भएको आमा तपाईँले ? म आफै खाना लिई हाल्थेँ ।”
सासूले मायालु स्वरले गिला गर्दै भनिन्, “नडरा, यसमा विष छैन । म तँलाई मार्ने छैन । तँलाई नयाँ सासू चाहिएकी होली, तर म हरेक जन्ममा तँलाई नै बुहारीको रूपमा चाहन्छु।” बुहारीले रुँदै आफ्नो सासूलाई अँगालो हालिन् । सासू पनि रोइन्, पहिलो पटक । र भनिन्, “ल अब खाना खा” । उनले आफ्ना आँसु पुछ्दै भनिन्, “तँ बुहारी होइनस्, तँ त छोरी होस् मेरी ।”
केही सम्बन्धहरू धेरै मीठा हुन्छन्, बस कुराहरू अलि तीता हुन्छन् ।
बुहारीलाई माया गरेर त हेर्नुहोस् । उनी तपाईँको परिवारको लागि आफ्नो घरको आँगन छोडेर आएकी छिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, फाल्गुन २० २०७७ १९:२८:५८
नयाँ काम सुरु गर्नु अघि, आफैलाई सोध्नुहोस् यी तीन वटा प्रश्नहरूको उत्तर !
बाँदर आतङ्कबाट किसानलाई सास्ती : स्थानीय प्रशासन भन्छ, ‘समाधान केही पनि छैन !’